Komiti yeParamende Inoudzwa Kuti Gwirikwiti Rauraya Vana Vakawanda
Komiti yeparamende inoona nezvehutano yabvunzurudza neChipiri vakuru vakuru mubazi rezvehutano mamiriro akaita zvinhu munyaya yechirwere chegwirikwiti. Komiti iyi yaudzwa matambudziko ari kusangana nebazi iri muchirongwa charo chekudzivirira chirwere ichi.
Vachipa humbowo kukomiti iyi, Dr Portia Manangazira, avo vari kutungamira bazi re epidemiology and disease control mubazi rezveutano, vati vana vanosvika zana nemakumi masere nevatatu, vafa negwirikwiti munyika kusvika pari zvino.
Dr Manangazira vati kunze kwevana vashanu chete, vamwe vose vakafa, havana kufira muzvipatara. Vatiwo vazhinji vavo, vana venhengo dzechitendero chechipotsori. Chechi iyi haibvumidze nhengo dzayo kuenda kuchipatara kunorapwa.
Komiti iyi yaudzwa zvakare kuti vana vazhinji vari kuramba vachifa nechirwere chisinganetse kurapa. Dr Manangazira vati kutanga musi wa10 Chivabvu, kusvika kupera kwa Chikumi, bazi rezveutano richange richiifamba richipinda mudzimba richibayisa vana, kuitira kuti vasabatwe negwirikwiti. Chirongwa ichi chichashandisa mari inoita US$8,8m
Imwe nhenge yekomiti iyi, uye vari mumiriri weKwekwe muparamende, VaBlessing Chebundo, vati zvakakosha kusungira nhengo dzechipostori kuti dzichengetedze hutano hwevana vavo.
VaChebundo vati vana havangafire zvitendero zvevabereki. Vatiwo sezvo chirwere ichi chichitapuriranwawo nemumhepo, zvakakosha kuchengetedza hutano hwevamwe vana, kuburikidza nekuminikidza vanhu vose kubayisa vana vavo.
Imwe nhengo yekomiti iyi, uye vachimirira Kadoma muparamende, Amai Editor Matamisa, vanowirirana naVaChebundo.
Asi Amai Matamisa vati zvakakosha kuti zvirongwa zvekubayisa vana zviitwe nemazvo, kuitira kuti vana vasarware kana kufa, mushure mekunge vapihwa mishonga inenge yagarisa. Amai Matamisa vatiwo gore rapera kune vana vazhinji vakafa mushure mekubayiwa kuKadoma. Vati nanhasi vachiri kungotsvaga kuti zvakafamba sei.
Mukuru weCommunity Working Group on Health, VaItai Rusike, vaudza Studio7 kuti kufa kuri kuita vana, zvinoratidza kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mubazi rezveutano.
Pamusangano uyu paitwa kurudziro yekuti pave nemutemo unomanikidza mubereki wese kuti abiyise mwana wake, kuitira kuti asabatwe negwirikwiti. Komiti yeparamende iyi, yakadaidza vakuru vekubazi rezvehutano iine chinangwa chekunzwa kuti sei vana vazhinji vari kungoramba vachifa nechirwere chegwirikwiti chinorapika nyore nyore.
Chirwere ichi chakatanga gore rapera muna Gunyana.